Xafladda furitaanka Kalfadhiga 40aad ee Barlamanka Puntland oo socota [Sawirro]
GAROOWE, Puntland- Waxaa hadda si toos ah uga bilaabatay xarunta golaha Barlamanka Puntland ee magaalada Garoowe xafladda furitaanka Kalfadhiga 40-aad ee golaha shacabka Puntland.
Munaasabadda waxaa kasoo qayb galay oo hoolka ku sugan Guddoomiyaasha labada Aqal ee Barlamanka Soomaaliya, Madaxweynaha Puntland, golayaasha dowladda, xildhibaano katirsan golayaasha shacabka ee dowladda Federaalka iyo marti sharaf kala duwan.
Guddoomiyaha gobolka Nugal oo hadda ka jeedinaya khudbad ayaa codsi u gudbiyay guddoomiye Jawaari kaasoo ah inuu la kulmo bulshada ka timid gobolka Koonfurta Soomaaliya ee ku nool gobolka Nugal.
Senetarada Aqalka sare iyo Xildhibaanada Barlamanka Soomaaliya ayaa la filayaa in daqiiqadaha soo socda kalmado ka jeediyaan furitaanka Kalfadhiga iyadoo sidoo kale ay hadleen qaar kamid ah bulshada rayid ah.
Garowe Online ayaa idiin soo gudbin doona arrimaha ugu muhiimsan ee laga jeediyo hoolka Barlamanka Puntland.
Waa markii ugu horaysay Guddoonka labada Aqal ee Barlamanka Soomaaliya ay ka qayb galaan Kalfdhiga Xildhibaanada Puntland iyadoo aysan jirin xafiisyo hay'adaha dowladda dhexe ku leeyihiin xarumaha maamul goboleedyada.
Booqashada labada Guddoomiye ee Garoowe ayaa kusoo aaday xilli uu jiro mugdi siyaasadeed oo u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo maamullada xubnaha ka ah.
Warsidaha Garowe Online oo warar ka helaya ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in magalaada Garowe ka socda kulamo u dhexeeya waftiga ka yimi Muqdisho ee labada aqal Barlamanka Soomaaliya iyo madaxda Puntland kuwasoo lagaga hadlayo sidii hay’adaha Dowlada uga qayb qaadan lahaayeen sidii nidaamka Federaalka loo baahin lahaa.
GAROOWE: Kalfadhiga 40aad ee Barlamaanka Puntland oo furmay [Sawirro]
Puntland 25.10.2017. 20:59
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali ayaa maanta si rasmi ah u furay Kalfadhiga 40aad ee Barlamanka..
Xildhibaanada Aqalka Sare oo Guddiyo doortay [Akhriso]
Soomaliya 29.04.2017. 21:25
​Khayre oo ka hadlay xiriirka wada-shaqayneed ee kala dhaxeeya Farmaajo
Soomaliya 28.04.2017. 16:13
Madaxweynaha Jubbaland oo furay Kalfadhiga Barlamanka
Soomaliya 03.04.2017. 22:07
Aqalka Sare ee BF Soomaliya oo Baqdin Amni loo xirey [Akhri Sababta]
Soomaliya 08.05.2018. 12:12